Sii-daynta warbixinta 2022 ee Istaraatiijiyadda Xakamaynta Daroogada Caalamka
Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa shaacisay warbixin sannadeedkeeda Istaartiijiyadda Xakameynta Daroogada Caalamiga ah.
Warbixinta sannadkaan ayaa hoosta ka xarriiqday in dhibaatada kaniiniyaasha daroogo ahaanta loo cuno ay wali caqabad weyn oo taagan ku yihiin dunida.
Sannadki saddexaad oo xiriir ah, dadka u dhimanaya maan-dooriye ay six ad-dhaaf ah u qaateen ayaa diin-waaki ugu sarreeyay gaaray gudaha Mareykanka. Sannadki 2020-ki tirada oo aheyd tii ugu badneyd xilligaas ayaa gaartay dhimashada in ka badan 91,000, sannadki 2021-ki tirada waxay kor u dhaaftay 100,000 oo ruux, sida laga soo xigtay shaxda hordhaca ah ee Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada.
Dawada dilaaga ah ee fentanyl ayaa mas'uul ka ah in ka badan 60 boqolkiiba dhimashada xad dhaafka ah ee maandooriyaasha.
Qeybta Galbeed ee dunida ayaa wali ah walaaca ugu weyn Mareykanka. Colombia, Peru, iyo Bolivia ayaa ku kala jira kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad meelaha darooga cocaine (Kookeynta) laga soo saaro ee dunida, walina ah ilo burqanaya.
Inkasta oo Colombia ay ku guuleysatay in ay dabar-goyso dhul-beereed cabbirkiisu dhamaa 103,000 oo heektar sannadki 2021, oo lagu tacbayay daroogadani. Waxaa intaasi sii dheer in ay si weyn u kordheen tirada qabashada daroogada lagu qabtay dalal ay ka mid yihiin Colombia, Ecuador, Panama, iyo Dominican Republic.
Bishii September 2021, Dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Bolivia iyo Venezuela ay mar kale ku guul-darreysteen in ay ka dhabeeyaan waajibaadka ka saarnaa heshiiskii caalamiga ahaa ee xakameynta daroogada. Dalka Bolivia, tani waxay ku timid kaddib marki ay dowladda ku fashilantay in ay xakameyso suuqeeda sharciga ee kookada, waloow ay dowladda qaadday tallaabooyin ay meesha uga saartay kookeynta iyo qaar kale oo ay gacanta ku dhigtay.
Gudaha Venezuela, taliska Nicolas Maduro ayaa ku guul-darreystay inuu qaado tallaabo macna leh oo lagula dagaallamayo ka ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada.
Mexico ayaa wali ah dariiqa daroogada ka timaado Koofurta Ameerika loo soo marsiiyo Mareykanka, iyadoo biyo-dhaca daroogada dilaaga ah ee uu asal ahaan xooggiisa ka imaan jiray Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha ama PRC. Waxaa xusid mudan in iyada oo wax-soosaarka fentaniilka ‘fentanyl’ ee Mexico uu sare u kacay ay hadana dowladda Mexico xoojisay qabashadiisa.
Isbaddalka deg degga ah ee wax soo saarka daroogada feentanaylka ee Shiinaha ee la geeyo Mexico ayaa ka tarjamaya awoodda kooxaha danbiilayaasha abaabulan ay u leeyihiin in ay si dhaqso ah ula qabsa karaan daruufaha isbadallada iyo gaaritaankooda ka ganacsiga caalamiga ah ee daroogada.
Waxaa intaasi sii dheer in kooxaha danbiilayaasha abaabulan ee Mexico in ay xarymo ka sameysanayaan Shiinaha. Kookeynta oo laga keeno Koofurta Ameerica waxaa la geeyaa meel walba oo caalamka ah.
Kooxaha daroogada ka ganacsada ee Nigeria waxay ballaariyeen gaaritaankooda dunida; suuqyada kookeynta Yurub iyo Asiya ayaa bullaalay; halka daroogada lagu kiimakada ah ee lagu soo sameeyo Shiinaha iyo Hindiya loo qeybiyo qeybo badan oo ka mid ah adduunyada.
Si uu u guuleysto nidaamka ka hortagga daroogada, ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo dalabka iyo bixinta daroogada. Dowladda Mareykanka waxay sii wadi doontaa in ay dalalka bah-wadaagta iyo hey’adaha gaarka ah kala shaqeyso sidi loo beegsan lahaa ururada danbiilayaasha ah, in la xalliyo musuq-maasuqa ah iyo in la xoojiyo ku dhaqanka sharciga.